132s Maninona ireo Repoblika efatra ireo dia manohitra ny volavolan-dalàna fampiroboroboana ny coronavirus ny Senatera images and subtitles
-Ny firenentsika dia miorina eo amin'ny fahamendrehan'ny asa. Inona no ataon'ity volavolan-dalàna ity, tsy amboary azy dia tsotra ve izany fa afaka mahazo vola bebe kokoa ianao amin'ny maha tsy an'asa noho ny azonao atao rehefa miasa. Izany dia famporisihana izay diso. Tsy afaka nikasa hamporisika olona izahay tsy miasa sy mahazo vola bebe kokoa fa tsy miverina miasa ary mandray ny karama mahazatra. -Roa an'ity volavolan-dalàna ity, ny fandoavam-bola $ 600 eo amin'ny tombotsoan'ny fanjakana raha ny tena izy dia mamela ny olona hanana ny karama saika avo roa heny amin'ny toe-javatra sasany. Ary te hanampy ny olona aho. Te-ho azo antoka fa, raha very asa ianao, manarona ny karamanao izahay. Fa ao anatin'ity volavolan-dalàna ity dia mahazo $ 23,15 isan'ora ianao. miorina amin'ny herinandro fiasana 40 ora, fa tsy hiasa. -Misy adihevitra momba izany na tsia avelantsika hanao volavolan-dalàna mahomby ny volavolan-dalàna mandondona mafy ity firenena ity amin'ny volana ho avy amin'ny alàlan'ny tsy fitandremana tsy fisian'ny asa. Izany no resahina amin'ity adihevitra ity. Noho izany dia te hanao zavatra tena tsotra izahay. Te hanamboatra izay tapaka eto izahay amin'ny filazàna fa mahasoa ny fiantohana amin'ny asa tokony hipetaka amin'ny 100% ny karama nataonao fony ianao tsy an'asa. Tsy resaka olona efa lasa tsy an'asa akory akory izany. Ity dia momba ny olona ho lasa tsy an'asa amin'ny herinandro ho avy. Izany fanitsiana rehetra izany dia milaza fa mifidy ao anatin'ny minitra vitsivitsy isika dia ny hoe tokony hosakanana ireo tombontsoa ho an'ny asa tamin'ny 100% n'ny karama azony azony raha mbola miasa. -Roa ity volavolan-dalàna ity, araka ny voasoratra amin'izao fotoana izao, ny governemanta handoa amerikana betsaka kokoa ho fanampiana ny governemanta noho ny hanao raha miasa amin'ny asany mahazatra izy ireo. Manohana ny fanitarana ny programa fiantohana ny tsy an'asa aho. Ity no fomba tsara indrindra sy haingana indrindra hahazoana vola amin'ireo olona izay tena mila an'io. Saingy tsy tokony hamorona rafitra isika izay mahasoa ny fiantohana asa avo kokoa noho ny karama. Tsy azontsika atao ny mandoa olona bebe kokoa mba tsy hiasa fa tsy hiasa. Fomba dikany mahazatra izany.
Maninona ireo Repoblika efatra ireo dia manohitra ny volavolan-dalàna fampiroboroboana ny coronavirus ny Senatera
< start="0.1" dur="5.1"> -Ny firenentsika dia miorina eo amin'ny fahamendrehan'ny asa. >
< start="5.2" dur="3.768"> Inona no ataon'ity volavolan-dalàna ity, tsy amboary azy >
< start="8.968" dur="4.366"> dia tsotra ve izany fa afaka mahazo vola bebe kokoa ianao >
< start="13.334" dur="2.534"> amin'ny maha tsy an'asa >
< start="15.868" dur="3.033"> noho ny azonao atao rehefa miasa. >
< start="18.901" dur="4.433"> Izany dia famporisihana izay diso. >
< start="23.334" dur="5.367"> Tsy afaka nikasa hamporisika olona izahay >
< start="28.701" dur="3.432"> tsy miasa sy mahazo vola bebe kokoa >
< start="32.133" dur="5.167"> fa tsy miverina miasa ary mandray ny karama mahazatra. >
< start="37.3" dur="2.534"> -Roa an'ity volavolan-dalàna ity, ny fandoavam-bola $ 600 >
< start="39.834" dur="2.1"> eo amin'ny tombotsoan'ny fanjakana >
< start="41.934" dur="3.4"> raha ny tena izy dia mamela ny olona hanana ny karama saika avo roa heny >
< start="45.334" dur="1.733"> amin'ny toe-javatra sasany. >
< start="47.067" dur="1.2"> Ary te hanampy ny olona aho. >
< start="48.267" dur="2.866"> Te-ho azo antoka fa, raha very asa ianao, >
< start="51.133" dur="2.334"> manarona ny karamanao izahay. >
< start="53.467" dur="4.9"> Fa ao anatin'ity volavolan-dalàna ity dia mahazo $ 23,15 isan'ora ianao. >
< start="58.367" dur="3.2"> miorina amin'ny herinandro fiasana 40 ora, fa tsy hiasa. >
< start="61.567" dur="2"> -Misy adihevitra momba izany na tsia >
< start="63.567" dur="2.633"> avelantsika hanao volavolan-dalàna mahomby ny volavolan-dalàna >
< start="66.2" dur="3.467"> mandondona mafy ity firenena ity amin'ny volana ho avy >
< start="69.667" dur="3.8"> amin'ny alàlan'ny tsy fitandremana tsy fisian'ny asa. >
< start="73.467" dur="1.7"> Izany no resahina amin'ity adihevitra ity. >
< start="75.167" dur="1.866"> Noho izany dia te hanao zavatra tena tsotra izahay. >
< start="77.033" dur="2"> Te hanamboatra izay tapaka eto izahay >
< start="79.033" dur="2.634"> amin'ny filazàna fa mahasoa ny fiantohana amin'ny asa >
< start="81.667" dur="2.4"> tokony hipetaka amin'ny 100% >
< start="84.067" dur="2.5"> ny karama nataonao fony ianao tsy an'asa. >
< start="86.567" dur="3.267"> Tsy resaka olona efa lasa tsy an'asa akory akory izany. >
< start="89.834" dur="2.6"> Ity dia momba ny olona ho lasa tsy an'asa >
< start="92.434" dur="1.5"> amin'ny herinandro ho avy. >
< start="93.934" dur="3.4"> Izany fanitsiana rehetra izany dia milaza fa mifidy ao anatin'ny minitra vitsivitsy isika >
< start="97.334" dur="2.467"> dia ny hoe tokony hosakanana ireo tombontsoa ho an'ny asa >
< start="99.801" dur="4.332"> tamin'ny 100% n'ny karama azony azony raha mbola miasa. >
< start="104.133" dur="1.867"> -Roa ity volavolan-dalàna ity, araka ny voasoratra amin'izao fotoana izao, >
< start="106" dur="1.767"> ny governemanta handoa amerikana betsaka kokoa >
< start="107.767" dur="1.7"> ho fanampiana ny governemanta >
< start="109.467" dur="2.434"> noho ny hanao raha miasa amin'ny asany mahazatra izy ireo. >
< start="111.901" dur="3.7"> Manohana ny fanitarana ny programa fiantohana ny tsy an'asa aho. >
< start="115.601" dur="2.399"> Ity no fomba tsara indrindra sy haingana indrindra hahazoana vola >
< start="118" dur="2.133"> amin'ireo olona izay tena mila an'io. >
< start="120.133" dur="1.801"> Saingy tsy tokony hamorona rafitra isika >
< start="121.934" dur="2.066"> izay mahasoa ny fiantohana asa >
< start="124" dur="2.334"> avo kokoa noho ny karama. >
< start="126.334" dur="3.133"> Tsy azontsika atao ny mandoa olona bebe kokoa mba tsy hiasa fa tsy hiasa. >
< start="129.467" dur="1.501"> Fomba dikany mahazatra izany. >